macOS Monterey sy iOS 15 dia hamela anao handraikitra horonan-tsary lalao avy amin'ny mpanara-maso mifanentana | Avy amin'ny mac aho
Toy ny mahazatra, amin'ny fampisehoana ny WWDC21 Tao anatin'ny efa ho roa ora, Tim Cook sy ny ekipany no nanazava taminay fotsiny ny zava-baovao momba ny kinova vaovao an'ny rindrambaiko Apple ho an'ny taona ity.
Manomboka izao dia hitsapa ny kinova beta voalohany an'ireo rindrambaiko ireo. Ankoatry ny fanaovana tatitra momba ny hadisoana amin'ny orinasa dia hasehon'izy ireo amintsika ihany koa ny vaovao "miafina" izay tsy naseho tamin'ny fehezanteny notontosain'ny Alatsinainy teo. Ny mahaliana iray dia mikasika an'io fandraisam-peo raha mankafy ny lalao ankafizinao….
Vaovao vaovao mahaliana momba ny lalao no hita tao amin'ny betas voalohany navoaka tamin'ity herinandro ity. Ao amin'ireo kinova beta voalohan'ny iOS 15, iPadOS 15 y macOS Monterey Anisan'izany ny fahafaha-misambotra sy mitahiry ny 15 segondra farany amin'ny filalaovana amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fihazonana bokotra manokana amin'ny mpanara-maso lalao mifanaraka aminao izay ampiasainao hilalao.
Raha tokony hitadidy ny hanomboka sy hampiato ny fandraisam-peo amin'ny lalao ianao, ity endri-javatra tsy maintsy atao vaovao ity dia mamela ny mpampiasa iPhone, iPad ary Mac hisambotra. Horonantsary 15 segondra tsindrio fotsiny sy mitazona ny bokotra Mizara (na Mamorona) amin'ny mpanara-maso lalao mifanentana, toy ny fifehezana Xbox Series X / S na PS5 DualSense.
Zava-baovao kely izay hahafaly ireo mpilalao izay tia mizara ny fotoana epic indrindra amin'ny lalao ifalian'izy ireo tsy mila mamoaka ny lavitra ilay lalaovin'izy ireo amin'izao fotoana izao.
Ity dia ohatra iray amin'ireo vaovao kely izay tsy nasehon'i Apple tamin'ny fampisehoana nataony ny alatsinainy lasa teo. Hipoitra izy ireo mandritra ny herinandro vitsivitsy ho avy satria manandrana ny vitsivitsy voalohany ny mpandrindra betas ary zahao izy ireo. Tsy hoe satria tsy ampy taona izy ireo, dia mbola mahaliana ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » macOS Monterey sy iOS 15 dia hamela anao handraikitra horonan-tsary lalao avy amin'ny mpanara-maso mifanentana